ထူးချွန်တဲ့အရောင်းသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ - MyWorld
Posted on 14/09/2016 by Alan Jarque
ယနေ့ခေတ်မှာ အဘက်ဘက်က အပြိုင်အဆိုင်တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ဈေးကွက်ထဲမှာရော မိမိလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာပါ အရောင်းသမားတွေကပိုမိုများပြားလာပါတယ်။ အဲ့လိုများပြားတဲ့အထဲကမှ သာမန်အရောင်းသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ထူးချွန်တဲ့ အရောင်းသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ သူများနဲ့မတူတဲ့အရည်အချင်းတွေရှိနေဖို့ လိုတာတော့ အသေအချာပါပဲ။ ဒီနေ့ရေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ အရောင်းသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအရည်အချင်း (၃) ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံကောင်းကောင်းအုတ်မြစ်ချလိုက်ရင် ဒီထက်ပိုမြင့်တဲ့နေရာကိုသွားတဲ့အခါ မခက်ခဲဘဲအဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်မှာပါ။ ကဲ ဒါဆိုရင် စလိုက်ရအောင်။
၁။ မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ကုန်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) ၀န်ဆောင်မှုအကြောင်းကို သေချာနားလည်ထားရုံသာမက အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကိုပါရှင်းလင်းစွာသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ စားသုံးသူ (Customer) က ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး မေးမြန်းလာတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်ဆိုရင် ကိုယ်က Customer ကို ဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲ? နမူနာအနေနဲ့ စံထားရမယ့်အဖြေလေးကိုအကြမ်းအားဖြင့်ဖြေပြပေးပါမယ်။ စားသုံးသူ။ ။ အစ်မတို့အိမ်မှာ ဆပ်ပြာမှုန့် A ကိုပဲသုံးတယ်။ အခုလာရောင်းတဲ့ ဆပ်ပြာမှုန့် B က ဘာပိုကောင်းလို့လဲ?
စံပြအဖြေ။ ။ အစ်မပြောတဲ့ဆပ်ပြာမှုန့်ကို ကျွန်တော်သုံးဖူးတယ်ဗျ။ သူကအတော်လဲသုံးလို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစ်မ ကျွန်တော်တုိ့ထုတ်တဲ့ဆပ်ပြာမှုန့်က အညစ်အကြေးတွေကို ခဏလေးနဲ့သန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီး Energy Saving Technology ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ရေကုန်သက်သာစေပါတယ်။
၂။ မိမိလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ စားသုံးသူနဲ့ဈေးကွက်ကို သေချာနားလည်ထားရမှာဖြစ်တယ်။ စားသုံးသူက ဘာကိုလိုအပ်နေတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲနေတာကိုသိပြီး လိုအပ်ရင် ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကိုပိုကောင်းမွန်အောင်အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေ ပြုလုပ်ရပါမယ်။
၃။ အပြောအဆိုညက်ညောရည်မွန်ရမယ်။ ကိုယ်နဲ့ ပထမဆုံးတွေ့ဆုံတဲ့ သူတစ်ယောက်နဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စစတွေ့ချင်းမှာ အရမ်းစီးပွားရေးဆန်ဆန်စကားပြောခြင်းထက် ကိုယ့်အပေါ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာအောင် အရင်တည်ဆောက်သင့်တယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာဈေးကွက်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုကို ပိုပြီးအလေးအနက်ထားကြတဲ့အတွက် ကိုယ့်ဘက်ကသာရိုးသားပြီးယုံကြည်မှုကိုမပျက်စီးအောင်စောင့်ထိန်းမယ်ဆိုရင် ပိုအောင်မြင်ပြီး ကိုယ့် Customer တွေနဲ့ကြာရှည်လက်တွဲလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
အခုအပေါ်က ဖော်ပြသွားတဲ့အချက်တွေကတော့ အောင်မြင်တဲ့အရောင်းသမားတိုင်း လိုက်နာကျင့်ုသုံးခဲ့တဲ့ အဓိကအချက်တွေပဲ ဖြစ်တယ်။ အပေါ်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်လေးတွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး ထူးချွန်တဲ့အရောင်းသမားတွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ယနခေ့တျေမှာ အဘကျဘကျက အပွိုငျအဆိုငျတိုးတကျလာတာနဲ့အမြှ စြေးကှကျထဲမှာရော မိမိလုပျကိုငျနတေဲ့လုပျငနျးထဲမှာပါ အရောငျးသမားတှကေပိုမိုမြားပွားလာပါတယျ။ အဲ့လိုမြားပွားတဲ့အထဲကမှ သာမနျအရောငျးသမားတဈယောကျအနနေဲ့ မဟုတျဘဲ ထူးခြှနျတဲ့ အရောငျးသမားကောငျးတဈယောကျဖွဈဖို့ ဆိုရငျတော့ သူမြားနဲ့မတူတဲ့အရညျအခငျြးတှရှေိနဖေို့ လိုတာတော့ အသအေခြာပါပဲ။ ဒီနရေ့ေးမယျ့အကွောငျးအရာလေးကတော့ အရောငျးသမားကောငျးတဈယောကျဖွဈဖို့လိုအပျတဲ့ အခွခေံအရညျအခငျြး (၃) ခကျြဖွဈပါတယျ။ အခွခေံကောငျးကောငျးအုတျမွဈခလြိုကျရငျ ဒီထကျပိုမွငျ့တဲ့နရောကိုသှားတဲ့အခါ မခကျခဲဘဲအဆငျပွခြေောမှနေို့ငျမှာပါ။ ကဲ ဒါဆိုရငျ စလိုကျရအောငျ။
၁။ မိမိလုပျငနျးရဲ့ကုနျပစ်စညျး (သို့မဟုတျ) ၀နျဆောငျမှုအကွောငျးကို သခြောနားလညျထားရုံသာမက အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြတှကေိုပါရှငျးလငျးစှာသိထားရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါမှသာ စားသုံးသူ (Customer) က ကိုယျ့ရဲ့ကုနျပစ်စညျးနဲ့ ပွိုငျဘကျကုမ်ပဏီကထုတျလုပျထားတဲ့ ကုနျပစ်စညျးနဲ့နျှိုငျးယှဉျပွီး မေးမွနျးလာတာတှရှေိနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုအခြိနျဆိုရငျ ကိုယျက Customer ကို ဘယျလိုပွနျပွောမလဲ? နမူနာအနနေဲ့ စံထားရမယျ့အဖွလေေးကိုအကွမျးအားဖွငျ့ဖွပွေပေးပါမယျ။ စားသုံးသူ။ ။ အဈမတို့အိမျမှာ ဆပျပွာမှုနျ့ A ကိုပဲသုံးတယျ။ အခုလာရောငျးတဲ့ ဆပျပွာမှုနျ့ B က ဘာပိုကောငျးလို့လဲ?
စံပွအဖွေ။ ။ အဈမပွောတဲ့ဆပျပွာမှုနျ့ကို ကြှနျတျောသုံးဖူးတယျဗြ။ သူကအတျောလဲသုံးလို့ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဈမ ကြှနျတျောတို့ထုတျတဲ့ဆပျပွာမှုနျ့က အညဈအကွေးတှကေို ခဏလေးနဲ့သနျ့ရှငျးအောငျလုပျပေးနိုငျပွီး Energy Saving Technology ကိုသုံးထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ ရကေုနျသကျသာစပေါတယျ။
၂။ မိမိလုပျငနျးနဲ့သကျဆိုငျနတေဲ့ စားသုံးသူနဲ့စြေးကှကျကို သခြောနားလညျထားရမှာဖွဈတယျ။ စားသုံးသူက ဘာကိုလိုအပျနတေယျ။ စြေးကှကျထဲမှာဘယျလိုတှပွေောငျးလဲနတောကိုသိပွီး လိုအပျရငျ ကုနျပစ်စညျးနဲ့ ဝနျဆောငျမှုကိုပိုကောငျးမှနျအောငျအဆငျ့မွှငျ့တငျမှုတှေ ပွုလုပျရပါမယျ။
၃။ အပွောအဆိုညကျညောရညျမှနျရမယျ။ ကိုယျနဲ့ ပထမဆုံးတှဆေုံ့တဲ့ သူတဈယောကျနဲ့ ပွောဆိုဆကျဆံရမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ စစတှခေ့ငျြးမှာ အရမျးစီးပှားရေးဆနျဆနျစကားပွောခွငျးထကျ ကိုယျ့အပျေါကိုယုံကွညျမှုရှိလာအောငျ အရငျတညျဆောကျသငျ့တယျ။ အထူးသဖွငျ့ မွနျမာစြေးကှကျမှာ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ယုံကွညျမှုကို ပိုပွီးအလေးအနကျထားကွတဲ့အတှကျ ကိုယျ့ဘကျကသာရိုးသားပွီးယုံကွညျမှုကိုမပကျြစီးအောငျစောငျ့ထိနျးမယျဆိုရငျ ပိုအောငျမွငျပွီး ကိုယျ့ Customer တှနေဲ့ကွာရှညျလကျတှဲလုပျနိုငျမှာ ဖွဈတယျ။
အခုအပျေါက ဖျောပွသှားတဲ့အခကျြတှကေတော့ အောငျမွငျတဲ့အရောငျးသမားတိုငျး လိုကျနာကငျြု့သုံးခဲ့တဲ့ အဓိကအခကျြတှပေဲ ဖွဈတယျ။ အပျေါကဖျောပွခဲ့တဲ့ အခကျြလေးတှကေို လိုကျနာဆောငျရှကျပွီး ထူးခြှနျတဲ့အရောငျးသမားတှေ ဖွဈကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။